မောင်စေတနာ: Myanmar Blogger Forum 7th Anniversary
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် ရည်ညွှန်းစာကြည့်တိုက်ရှိ အင်တာနက် ဂျာနယ်ကို ဖတ်ရှုနေရင်း Myanmar Blogger Forum ကျင်းပမည့် အစီအစဉ်ကို သိရလေ၏။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချင်စိတ် တဖွားဖွား ဖြစ်မိလေသည်။
သြော် . . . ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဘလော့လောကထဲကို ၂၃.၁၀.၂၀၀၇ ရက်နေ့တွင် ၀င်ရောက်သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် ခြောက်နှစ်ပင် ပြည့်တော့မည်။ Myanmar Blogger သည်လည်း ယခုဆိုလျှင် ၇ နှစ်ပင် ပြည့်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ဘလော့အခမ်းအနားများကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ယခု ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Myanmar Blogger Forum ကို တက်ရောက်ချင်မိ၏။ ကျင်းပမည့် ၃၁ ရက်တွင် ကျွန်ုပ်သည် ရန်ကုန်သို့ လာရာ လမ်းခရီးတွင်ပင် ရှိလိမ့်မည်။ အခမ်းအနားက ၂ ချက်ထိုးတွင် စတင်မည်။ ကျွန်ုပ်က ၃ ချက်ထိုးမှ ရန်ကုန် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်ကို ရောက်ပေလိမ့်မည်။ တက်ရောက်ရမည့် နေ့ရက်တွင် ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရှိသော်လည်း အချိန်မမီချေ။
လွန်ခဲ့ပြန်ပြီး Myanmar Blogger Society ရေ. . . . .
myo min thein said...
8:37 AM, January 09, 2014
နောကမထပ်ဒီနေရာကိုပြန်မလာတော့ ဘူးလား ???
4:53 AM, April 02, 2014
မိုး မောင်မောင် said...
ဘလော့နဲပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလောက်ရှင်း ပြပါလားဟင်။ fb နဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။